निशान छाप भित्रको नक्सा परिबर्तनका निमत्ती गर्न लागिएको संविधान संशोधन किन अन्तिम समयमा अाएर कार्य सुची बाट हटाईयो? -
२०७७, १५ जेष्ठ बिहीबार ००:०९ May 28, 2020 clickonLeaveaComment on निशान छाप भित्रको नक्सा परिबर्तनका निमत्ती गर्न लागिएको संविधान संशोधन किन अन्तिम समयमा अाएर कार्य सुची बाट हटाईयो?
नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नया नक्सा जारी भए सङै निशान छाप परिबर्तन गर्न संसदमा टेबल हुन बाट रोकिएकोछ।
हिजो सङिय संसद सचिबालयले सार्बजनिक गरेको सम्भाबित कार्य सुचीमा समाबेस भएको प्रस्ताब पेशको कार्य सुची अन्तिम समयमा हटाईेको थियो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नया नक्सा अनुशार निशान छाप परिबर्तन गर्ने परियोजनका लागी हुन लागेको संविधान संशोधन प्रस्ताब सम्भाबित कार्य सुची बाट हटेपछी यस बिषयमा बिभिन्न टिका टिपणी सुरु भएकाछन।
संविधान संशोधन प्रस्ताब संविधान को अनुसुची ३ मा रहेको निशान छाप भित्रको नक्सा परिबर्तनका निमत्ती मात्र जेष्ठ ९ मा दर्ता भएको थियो। कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको बिषय हटेलगत्तै केही भारतीय मिडियाले त नेपाल नयाँ नक्साबाट पछि हटेको, संविधान संशोधन हुन नसकेकोजस्ता समाचार पनि आए । जबकि, एउटा बैठकको कार्यसूचीबाट हट्दैमा विधेयक फिर्ता भएको हुँदैन ।
संसद सचिवायलयले संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हट्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिमा उक्त विषयबारे छलफल गर्नका लागि समय माग्नु रहेको जानकारी दियो । तर, कांग्रेसले भने जेठ १४ गतेका लागि बैठक र सम्भावित कार्यसूची नै नबनेको भन्दै यसको खण्डन गरेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने ‘संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसदमा रहेका दलहरु एकठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा संभावित कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाउने अनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई त्यसबारेमा आरोपित गर्न खोज्ने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं”। कांग्रेस संसदीय दलले यस्तो प्रवृतिको निन्दासमेत गरेको छ ।
संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । नेकपासँग प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत छैन । संविधान संशोधनका लागि उसलाई कांग्रेस, राजपा र समाजवादीमध्ये कुनै न कुनै दलको साथ चाहिन्छ । अर्कोतिर, राष्ट्रियताको विषयमा संविधान संशोधन हुन लागेकाले आफूहरूको सहमति रहेको तर समय चाहिएको भनेर ती दलहरूले माग गरेपछि बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।
२०७६, ४ मंसिर बुधबार ०७:१४ November 20, 2019 clickon
२०७६, १६ आश्विन बिहीबार ०७:४३ October 3, 2019 clickon